नाडा अटो शोमा विभिन्न बैंकहरुले स्टल नै राखेर सवारी साधन किन्नका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण दिने, हेर्नुहोस कुन बैंकको कति ब्याज ? – " कञ्चनजंगा News "
नाडा अटो शोमा विभिन्न बैंकहरुले स्टल नै राखेर सवारी साधन किन्नका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण दिने, हेर्नुहोस कुन बैंकको कति ब्याज ?
No Comments on नाडा अटो शोमा विभिन्न बैंकहरुले स्टल नै राखेर सवारी साधन किन्नका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण दिने, हेर्नुहोस कुन बैंकको कति ब्याज ?
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि शुरु भएको नाडा अटो शोमा विभिन्न बैंकहरुले स्टल नै राखेर सवारी साधन किन्नका लागि सस्तो व्याजदरमा ऋण दिने स्किम ल्याएका छन् । बैंकहरुले नाडा अटो शोको अवधिमा गाडी खरिद गर्नेलाई लक्षित गरी अन्य समयमा भन्दा सस्तो ब्याजदरमा लोन उपलब्ध गराउने बताएका छन् । बैंकहरुले विदयुतीय गाडीमा झनै सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने स्किम ल्याएका छन्। जसको फाइदा ग्राहकले उठाउन सक्नेछन् ।
भदौ १० गतेदेखि शुरु मेलामा विभिन्न कम्पनीहरुले लेटेस्ट मोडेलका गाडी मेलामा राखेका छन् । आकर्षक सुविधा सहित ल्याइएका मोटरका लागि बैंकहरु पनि सस्तो ऋण उपलब्ध गराउँदै ग्राहकलाई अझ बढी सेवा दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले विद्युतीय गाडीमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै सबै बैंकले २० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्ने जनाएका छन्।
१२) हिमालयन बैंकले अटो लोनका लागि नाडा अटो शोमा ९.९५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने बताएको छ । बैंकले ८ वर्षका लागि कर्जा लिँदा ०.५ प्रतिशत प्रोसेसिङ शुल्क लिने बताएको छ । क्लिक मांडू
← अब तपाईँले फेरि अर्को पनि परिचय पत्र गोजीमा राख्नुपर्ने → स्कुलमा कोचिङ पढ्दा पढ्दै बेहोस भएर मृ*त्यु र उनका अन्य आठ जना सहपाठीपनि एकै पटक बे*होस्